Warshadda Nadiifinta Hawada iyo Sunta jeermiska iyo soosaarayaasha | SONGZ
Nadiifinta hawada iyo nidaamka jeermiska
Tilmaamaha sifaynta hawada iyo xuduudaha farsamada
Ku habboon hal qaboojiye soo celinta:
Ku habboon laba-qaboojiye soo-celinta hawada:
Mashruuca wasakheynta Uruurinta bilowga ah ee wasakhda Lagu qiimeeyaymugga hawada (m3 / h) Shaqeynta heerka ka saarida 1h (%)
Wadarta iskudhiska dabiiciga ee is bedbeddelaya (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 ﹥4800 92.2%
Walxaha 0.70 ~ 0.85mg / m3 ﹥4800 99.9%
Microorganism Marka loo eego GB 21551.3 ﹥4800 99.9%
Xaaladaha Imtixaanka: 12 mitir baabuur weyn oo rakaab ah, 6 taageere uumi-bixiye, ugu badnaan hawlgalka socodka hawada, wareegga gudaha
Ion xoog leh waxay leeyihiin awood aad uxun oo aad uxun, waxay oksijiin karaan oo uqasmi karaan formaldehyde, methane, ammonia iyo gaasaska kale ee kacsan ee urta (VOC) ee gaariga kujiraan qolka bon dioxide, biyaha iyo oksijiinta. Heerka ka saarista wuxuu gaarayaa 95% kadib 1 saac oo hawlgalka ah.
Imtixaanka Fadhiga: 25 daqiiqo kadib markii si qoto dheer loo nadiifiyey, PM2.5 waxaa laga dhimay 759 μg / m3 (wasakh lixaad leh oo wasakhda ah) oo laga dhigay 33 μg / m3 (tayada hawada heerka koowaad), tayada hawaduna si weyn ayey u muuqatay wanaajiyay.
1. Qaabka wada noolaanshaha, qadarka abuurka ozone waa 0.05ppm, oo aad uga yar qiimaha badbaadada ee 0.15ppm. Heerka jeermiska dhalmada wuxuu gaarayaa 99% kadib 30 daqiiqo oo qalliinka kadib.
2. Ultraviolet ma laha awood wax-ka-dhexgalid wax dhibaato ahna uma geysanayo jidhka bini'aadamka markii aanu toos u shidanayn; waxaa jira lakab sawir-qaade ah, lakabka shaandhada shaashadda iyo albaabka albaabka u dhexeeya inta u dhexeysa laambadda jeermiska dhalista ee ultraviolet iyo qolka si looga hortago soo-gaadhista tooska ah ee rakaabka, Si nabadgelyo leh ayaa loo isticmaali karaa
Fiirsashada Ozone Heer jeermiska ka-dhalashada Heerka ka-dhigidda taran-ka-dhigidda ee heerka 0.1PPM
saacadaha shaqada 15 daqiiqo 30 daqiiqo 15 daqiiqo 30 daqiiqo
Bacillus-ka tiifow 91.2% 95.5% 95.9% 99.4%
Gumaysiga dabiiciga ah 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
Xaaladaha Imtixaanka: Adeegso isku-darka 0.05ppm iyo 0.1ppm O3 si aad u tijaabiso saameynta ay ku leedahay jeermiska ka-dhalashada iyo heerka jeermiska looga dhigo weelka xiran ee 200L.
Nidaamka nadiifinta hawadu wuxuu leeyahay astaamo iyo faa'iidooyin
1. Afar teknolojiyad muhiim ah
Hagaajinta tayada hawada
Waxyaabaha Uruurinta boodhka korantada (PM2.5) Laydhka UV ionizer Filter Photocatalyst
Madhalays ka dhigida × √ √ √
Ka saar VOC √ × √ √
2. Teknoolojiyad polymerization sawir qaade ah oo xoog leh, wada noolaanshaha mashiinka aadanaha, jeermiska iyo jeermiska:
Tikniyoolajiyad xoog leh oo lahaansho leh, oo ay weheliso UVC ultraviolet, oksijiin firfircoon, ion taban iyo tikniyoolajiyadda polymerization ee sawir qaadista, si dhammaystiran oo dhakhso leh u dila fayrasyada iyo bakteeriyada, kana hortagga faafidda cudurka. Heerka jeermiska dhalista waa 99.9%, heerka boodhkuna waa 99.9%. Waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa gaasaska waxyeellada leh sida formaldehyde, benzene, ammonia, iyo urta kala duwan, qiiqa, iyo urta ku jirta qolka gaariga. Waxay leedahay qaab shaqo oo wada noolaanshaha mashiinka bini'aadamka, jeermiska aan dhamaadka lahayn, iyo wasakheynta.
3. Ku darso ion oksijiin aan fiicnayn si loo baabi'iyo daalka safarka.
6 milyan oo ion ogsijiin ah oo liidata, hawo u qaboojiya, firfircoonida unugyada, xoojiya difaaca jirka iyo baabi'inta daalka safarka.
4. Nadiifinta hawada, kala daadashada gaasaska waxyeelada leh, dayactir la’aan iyo wax aan la isticmaali karin.
Lagu rakibay gudaha qaboojiyaha qaboojiyaha, cabirka yar ma fadhiyo boos dheeri ah, iyada oo loo marayo silsiladda falcelinta si xoog leh loogu baabi'iyo gaaska wasakhaysan ee qolka ku jira, ka takhalus PM2.5, Qaybaha la hakiyey PM2, ku ilaali jawiga hawada ee baabuurka mid cusub oo caafimaad qaba, maya Isticmaalka inta lagu jiro isticmaalka, Dayactir la'aan.
5. La socodka fog, digniinta amniga, xakamaynta caqliga.
Waxay kuxirantahay xariiqa CAN ee gaariga oo dhan, iyo xogta dareemayaasha tayada hawada waa lagala socon karaa waqtiga dhabta ah dashboardka, iyo beddelka caqliga iyo waqtiga-waqtiga dhabta ah ee digniinta habka shaqada ee sifaynta ayaa lagu xaqiijin karaa iyadoo la raacayo tayada hawada; daaqadda soo noqoshada waxay leedahay muuqaal madax bannaan oo u gaar ah (muujinta fiirsashada walxaha PM2.5, heerkulka, qoyaanka iyo muujinta tayada hawada, ikhtiyaar ahaan), waxay u oggolaaneysaa rakaabka inay si caqligal ah u fahmaan xaaladda wasakhda ee deegaanka baabuurka iyada oo loo marayo bandhigga, taasoo ka dhigaysa wax soo saarka heer sare muuqaal ahaanna wax ku ool ah.
6. Waxtarka shaqada ee sarreeya, isticmaalka tamarta oo hooseeya, saameynta ugu yar ee isticmaalka tamarta gawaarida ama baaxadda socodka.
Habka "Dynamic polarization" wuxuu dammaanad qaadayaa wax-ku-oolnimada isdaahirinta ee muddada dheer soconaysa, xasilloonida xaddidanna leh, awoodda haynta boodhku waxay dhowr jeer ka badan tahay miiraha isla qeexitaanka; oo la jaan qaadaya nidaamka korontada ee rakaabka rakaabka, isticmaalka korontada ee moduleka wax nadiifiya jeermiga ee baska 12-mitir ah waa 10W oo kaliya, badbaado iyo tamar-badbaadin ah, oo ku haboon Qalab basaska caadiga ah iyo kuwa korontada ku shaqeeya.
Tijaabinta Sifeeyaha Hawada
1 Heerka ka saarida(1h) 99.9%
2 Heerka ka saarida Formaldehyde (1h) 90.4%
3 Heerka ka saarida Toluene(1h) 91.4%
4 Heerka ka saarida(1h) 92.2%
5 Heerka ka saarida Xylene(1h) 93.0%
Tartanka Muhiimka ah ee Sifeeyaha Hawada ee SONGZ
Sifeeyaha hawada ee SONGZ
Hawlaha isdaahirinta isku dhafan
Ma u baahan tahay hawo? Hawo qaadista taageerayaasha Ma jirto hawo
Habka sifaynta hawada 1. Nidaamka nadiifinta hawada ee ion xoog leh2. Kobcinta ozone-ka (ikhtiyaar)3. Isku-dhafka boodhka elektaroonigga ee isku-dhafan
4. Isku-dhafka miiraha sawir-qaadaha
5. Madhalays ka dhigista UV-ga
1. Nadiifinta Nalalka Gawaarida UV2. Xereen dawada jeermiska
Tartanka asaasiga ah 1. Isdhaxgalka guud, cabir yar, isbadal aad u yar oo gaariga ku dhaca
2. Si wax ku ool ah uga saari karaa dhammaan noocyada bakteeriyada, fayrasyada, boodhka iyo gaasaska sunta iyo waxyeelada leh
3. Qiimaha guud ee Sifeeyaha ayaa hooseeya. Haddii aad rabto inaad rakibato qayb ka mid ah ozone-ka la xoojiyay, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ku darto kharash dheeraad ah oo ka badan 100 RMB.
4. Hawsha sifaynta hawada waa la shidi karaa marka rakaabka la wado. Sifeeyaha hawo laftiisa ayaa abuuri doona qadar yar oo O3 ah (qiyaastii 0.02ppm, oo udhaxeysa meel amaan ah) si loo gaaro saameynta jeermiska ee waqtiga dhabta ah.
5. Marka virus-ka looga hortago loo baahan yahay gaariga oo dhan, ka hor inta aan gaariga la shidin ama marka uusan qofna gaariga saarneyn, qaabka ozone ee la wanaajiyay ayaa daaran, wuxuuna si otomaatig ah u istaagayaa 15 daqiiqo kadib, taas oo aad waxtar u leh iyo keydinta tamarta.
6. Marka qaababka qaboojinta, kululaynta iyo hawo-qaadashada aan shidnayn, marawaxadda nidaamka nadiifinta ayaa si otomaatig ah loo bilaabaa 5 daqiiqo oo la joojiyaa 20 daqiiqo. 1. Isbedelo waawayn oo ku dhaca gaadhiga oo dhan, waxaa lagama maarmaan ah in la rakibo laambadaha dheeriga ah ee gaadhiga, oo loo baahan yahay in la rakibo tiro dhan oo ah nidaamka lagu buufiyo biyaha lagu nadiifiyo. Mashruuca sixitaanka waa mid balaaran kharashkuna waa badan yahay.
2. Bakteeriyada iyo fayraska waa la nadiifin karaa, laakiin ma laha daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay boodhka iyo gaasaska sunta ah iyo kuwa waxyeellada leh.
3. Nadiifinta hawada iyo jeermiska jeermiska lama oggola markay rakaab qaadayaan. Haddii la sameeyo iyo jeermiska jeermiska kadib, markaa isweydaarsiga hawada ayaa loo baahan yahay, waxtarkooduna wuu hooseeyaa.
Kiisaska Codsiga ee Nidaamka Nadiifinta Hawada ee SONGZ
Waqtigan xaadirka ah, waxaa lagu bixiyay qaybo badan oo ka mid ah moodooyinka heerka sare ee OEMs sida Xiamen Jinlong iyo Zhengzhou Yutong.
Waxaan rajeyneynaa inaan kulashaqeyno si aan uhorumarino deegaanka inta ay dadku safrayaan lana wanaajiyo tayada hawada gudaha gaariga!
Hore: Qaboojiyaha Baska ee Loo Yaqaano Double Decker Bus
Xiga: Qaboojiyaha Baabuurka Rakaabka